ကြည့်မိသူတိုင်းကို မျက်ရည်ကျစေခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော် ကြာစိရဲ. သီချင်းသစ် | Buzzy
သီချင်းလေးက ကောင်းသလို ရိုက်ထားတာလည်း မိုက်ပါတယ်။
ယခုရက်ထဲ ဖေ့စ်ဘုခ်ပေါ်က ပရိသတ်တွေကို မျက်ရည်လည်ရွဲဖြစ်စေခဲ့တာကတော့5Star အဖွဲ့က လူရွင်တော် ကြာစိရဲ. ကံစေရာ သီချင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသီချင်းကိုတော့5Star အဖွဲ့ရဲ. ဆယ်နှစ်ပြည့် အထမ်းအမှတ်ခွေမှာ ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပြီး သီချင်းကိုတော့ တေးရေးမှော်ရှင်က ရေးသားထားပေးပြီး ကြာစိက သီဆိုထားတာပါ၊ စိတ်ကူးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ဒါရိုက်တာ ယုန်လေးက ပုံဖော်ပေးထားပြီး ပါင်သရုပ်ဆောင်ထားတာကတော့ ကြာစိနဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်ပေါင်းများစွာ ပုံဖော်ပေးထားပါတယ်။
ဒီသီခငျြးကိုတော့5Star အဖှဲ့ရဲ. ဆယျနှဈပွညျ့ အထမျးအမှတျခှမှော ပါဝငျလာမှာ ဖွဈပွီး သီခငျြးကိုတော့ တေးရေးမှျောရှငျက ရေးသားထားပေးပွီး ကွာစိက သီဆိုထားတာပါ၊ စိတျကူးကောငျးကောငျးလေးနဲ့ ဒါရိုကျတာ ယုနျလေးက ပုံဖျောပေးထားပွီး ပါငျသရုပျဆောငျထားတာကတော့ ကွာစိနဲ့အတူ သရုပျဆောငျပေါငျးမြားစှာ ပုံဖျောပေးထားပါတယျ။
Source : Bo Bo Music Production